crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Islaam-naceyb kusii kordhay UK dhexdeeda | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka January 11, 2016	0 303 Views
Muqdisho (Himilonews) – “Dhab ahaan maheyno waxaan caddeyno, hayeeshe isla hadana dadku waxay naga fishaan inay nafteenna u caddeyno.”
Tani waa dareen uu muujiyay mid kamid ah dadka da’yarta Muslimiinta ah ee ku nool UK kadib weeraradii Paris iyo Santiago.
Bilihii ka danbyeeyey xasuuqii ISIS ka geysatay Paris, Islaamu naceybka ka dhanka ah Muslimiinta wuxuu kor u kacay 300%.
Hadda, gudaha fidyow lagu wareystay tiro dhalinyaro Muslimiin UK ah ayaa ka hadlay naceyb-maalmeedka ay kala kulmaan dadka UK kula nool.
“Mustaqbal sidee ah ayaynu halkani ku leenahay?” Taasi waa su’aasha ay muujiyeen kuwa lagu wareystay mawduuca kooban “Magaraneysaa qofka aan ahay?”
Tira kamid ah kuwa la wareystay ayaa eedda saaray doorka saxaafadda reer Galbeedka oo dabka ku shiday dhalashada Islaam-naceybka ka dhanka ah Muslimiinta.
“Waxaan filayaa in warbaahintu ay door ballaaran ku leedahay. Meel aysan awoodin inay dunida uga muujiyaan dhanka quruxda iyo qaayaha badan ee Muslimiintu ifka ku leeyihiin, way adag tahay in dhankooda sirgaxan oo la ban-dhigo ay saameyn fiican ka muujiyaan bulshooyinka ay la nool yihiin.”
Mid gabar dhalinyar ah ayaa weydiiday sida dadweynaha guud looga filan karo inay si ka duwan wax ku arkaan meel Muslimku lagu daabaco humaag naxdin iyo nabareys leh.
“Haday aqrinayaan warbixino dareen sida maalin kasta, maxaa kale oo marka ka fikiraan? Kaliya waa jaad murugo ah in bulsho ballaaran lagu shaabado iniin yar. Waxaana maleynayaa in haddii dadka la tusi lahaa falalka suuban ee Muslimiintu ku leeyihiin dunida, kadib laga yaabee si fiican ayaa lagu eegi lahaa.”
Xittaa hal-fudeysiga howl-maalmeed ee laga arkayo Muslimiinta British-ka, mid kamid ah qeyb-galayaasha ayaa muujisay waaya’aragnimadeeda ku sugan socdaalka ay ku qaadato inta u dhaxeysa guriga iyo goobteeda shaqo—iyada oo xiran xijaab.
“Maalin kasta safarkayga, waxaad arkaysaa dadka kugu eegaa fiiro sirgaxan. Kaliya ka qaadashada tusaale heegada sare iyo hadalka jirka ayaa naceyb laguugu qaadayaa. Dhab ahaanna, gebigood raaxo kuma dareemaan inay hareerahooda timaado gabar xiran xijaab.”
Nagala soo xiriir: Himilonews@gmail.com.
Previous: Muxuu salka ku hayaa xiriirka xumaaday ee Soomaliya iyo Iran
Next: La kulan: Ninka ugu cimriga dheer dunida
Sawiro — Sababta Guri Dabaq loogu daahay Dhir faalalaysa!
Baydhabo mise Barisamo!!
Youtuber Jarmal ah oo qaatay diinta Islaamka.